सम्झनाका लहरहरु ( निरज सापकोटा ): 09/07/12
सम्झनाका लहरहरु ( निरज सापकोटा )
नेपाली गजल कबित र ताजा ताजा समाचारको लागि हाम्रो अभियान "नेपाली हौ हामी नेपाल को गौरब बढाउ " It’s hard to find someone whom you truly love, much less to find someone who loves you as much. When the chance comes, don’t ever let go
निन्द्रामा सेक्स गर्नुहुन्छ ? सेक्ससोमनिया
जानकारहरुले वयस्क मानिसले दिनमा ७-८ घण्टा सुत्नै पर्ने बताउँछन्। किशोर-किशोरीले दिनमा ९ घण्टा र बच्चाहरुले १२ घण्टा सम्म सुत्नु स्वास्थ्यको लागि अति उत्तम मानिन्छ। धेरै वयस्क मानिसको निन्द्राको शत
्रु सेक्स भएको छ।
स्लिप सेक्स जसलाई सेक्ससोमनिया भनिन्छले धेरै वयस्काहरु प्रभावति भएका छन । यो रोग लागेपछी मानिसले निन्द्रामै पनि सेक्स गर्दछ र सुतिरहेको अचेत अवस्थामा पनि सेक्स सम्वन्धि क्रियाकलाप गर्दछ। नेपाली समाजमा सेक्सको बारेमा खुलेर कुरा गर्ने चलन नभएकाले धेरै मानिसले यो रोग र यसको परिणाम थाहा नपाएका हुन सक्दछन्।
यो रोग लागेका मानिसले संगै सुतेको व्यक्तिसंग अचेत अवस्थामै सेक्स सम्वन्ध राख्न सक्ने भएकाले सेक्स सम्वन्धी दुर्घटना जस्तै बलात्कार,दुर्व्यवहार समेत हुन सक्दछन्।
यदि तपाईले आफैलाई या आफ्नो सेक्स पार्टनरननाई यो रोग लागेको आंशका छ भने तत्काल चिकित्सककहाँ पुग्नु बुद्धमानी हुन्छ किन भने यसले खतरनाक रोगहरु पार्किनसन, डिमेन्टिया,न्याक्रोलेप्सी देखी ब्रेन ट्युमर सम्म पुर्याउन सक्दछ ।
Neeraj sapkota sahajpur7bayala kailali nepal
Posted by neeraj sapkota at 22:26
भूकम्पमा परी ५३ जनाको मृत्यु, १५० जना भन्दा बढी घाइते
चीनको दक्षिण-पश्चिममा भएको भूकम्पमा कम्तीमा ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन् । संचारमाध्यमले
जनाएको अनुसार २० हजार भन्दा बढी घरमा क्षति भएको छ ।
मापन केन्द्रका अधिकारीले जनाएको अनुसार भूकम्प ५.७ रेक्टर स्केलको थियो । भूकम्पका केन्द्र २७.५ डिग्री उत्तर भागमा थियो भने १०४.० डिग्री पूर्वका देशतिर करिब १४ किलोमिटरको गहराईमा रहेको थियो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्वारको काम व्यापक मात्रामा भइरहेको पनि सरकारी निकायहरुले बताइएको छ । भूकम्पबाट दक्षिण पश्चिमी चीनका युनान र गुइजाउ प्रान्त प्रभावित भएका छन् । युनान प्रान्त बढी प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
Posted by neeraj sapkota at 22:22
७८ प्रतिशत पुरुषहरु अन्य स्त्रीहरुसँग यौन सम्वन्ध राख्छन्
हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार पुरुषहरु पत्नी हुँदा हुँदै पनि अन्य स्त्रीहरुसँग यौन सम्वन्ध राख्छन् । उनिहरु न त पत्नीलाई छोड्न चाहन्छन न अन्य महिलाहरुसंग सेक्स सम्वन्ध राख्
न छोड्न चाहन्छन् ।
अध्ययन अनुसार धेरैजसो पुरुषहरु आफना साथीहरुसंग समय विताउन चाहन्छन् र उनिहरु अधिक यौन सम्पर्क कायम गर्न चाहन्छन् । परिवर्तित समय अनुसार मानिसहरु बढीमात्रामा खुला यौन सम्पर्क प्रति आकर्षित हुँदैछन् । यसैका लागि शोधकर्ताहरुले सर्वेक्षण गरेका छन् । सर्वेक्षणको नतिजाले ७८ प्रतिशत पुरुषहरु आफनी पत्नीलाई धोका दिएर परस्त्रीसंग यौन सम्वन्ध स्थापित गर्छन् भन्ने देखाएको छ ।
शोधकर्ताहरुका अनुसार पुरुषहरु भावनात्मक रुपबाट एकै महिलासंग जीवन विताउन चाहन्छन् तर यौन सम्वन्ध भने कैयौँ महिलाहरुसंग राख्न चाहन्छन् ।
Posted by neeraj sapkota at 22:19
राष्ट्रपति हटाउन सेक्स हडताल
अफि्रकी मुलुक टोगोका महिलाले राष्ट्रपटि हटाउने अनौठो आन्दोलन उद्घोष गरेका छन् । ‘नागरिक अधिकार समूह’ अन्तर्गत राजनीतिमा सक्रिय महिलाहरुले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्दै सातदिन यौन सम्बन्ध नराख्ने सेक्स हड्तालमा सरिक हुन आम महिलाहरुलाई आव्हान गरे ।
‘टोगो बचाउ’ समूहकी महिला नेतृ इसाबेल आमेगानभीले महिलाहरुलाई आफ्ना पति वा यौन पार्टनरसँग सोमबार बाट एक हप्तासम्म सेक्स नगर्न आग्रह गरेको बताइन् । उनले यस हड्तालले टोगोका पुरुषहरुलाई राष्ट्रपति फाउनरे ग्नासिङबे विरुद्ध आन्दोलन गर्न दवाव दिने विश्वास गरेकी छन् ।
राजधानी लामेमा शनिबार आयोजित हजारौ महिलाको र्‍यालीमा सेक्स हडताल घोषणा गरिएको खबर नागरिक दैनिकमा खबर छ । अक्टोबरमा हुन लागेको संसदीय निर्वाचनमा ग्नासिङवेको पार्टीलाई पुनः विजयी गराउने गरी हालै भएको निर्वाचन सुधार विरुद्धको एउटा गठबन्धनले विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो ।
३८ बर्षदेखि पश्चिम अफि्रकी मुलुक टोगोमा शासन गर्दै आएका बाबु इयाडेमा ग्लासिङवेको २००५ मा निधन भएपछि ग्नासिङवे सत्तामा आएका हुन् । ग्लासिङवे र उनकी पत्नीले भने सेक्स हड्तालका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
Posted by neeraj sapkota at 08:15
स्लिम जिउ बनाउन शिल्पा कसरत गर्दै
बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी फेरी आफ्नो उहीँ पुरानो स्लिम जिउमा फर्किन हतारमा छिन् । केही महिनाअघि छोरा पाएर अहिले सुत्केरी अवस्थामा रहेकी शिल्पा अब छिटै जिउ बनाएर क्यामराको अगाडि आउन चाहन्छिन् । गर्भवती भएको बेला शिल्पाको वजन झण्डै १९ किलो भएको थियो । तर सुत्केरी भएपछि उनले जिउडालमा विशेष ध्यान दिन थालिन् र अहिलेसम्म १० किलो वजन घटाइसकेको बताइन्छ । उनले अझै तोल घटाएर स्लिम बन्ने धूनमा छिन् । संजय दत्तको एक्शन रियालिटी शो सुपर फाइट लिगको लागि एक प्रमोशनल भिडियोमा अभिनय गर्नका लागि समेत उनी वजन घटाउन हतारिएकी हुन् ।
Posted by neeraj sapkota at 08:13
रेखा थापाको मिनिस्कर्ट कथा (गाइजात्रा विशेष )
आफ्नो नयाँ फिल्म ‘सालीको पोइ’ को प्रिमियर हेर्न हल गएकी रेखालाई बेस्सरी पिसाबले चाप्यो । हाफ टाइम हुनासाथ उनी दौडिँदै शौचालयभित्र छिरिन् । तर, त्यो परेछ पुरुष शौचालय । आफ्नो पछिपछि धेरै पुरुषको भिड लागिसकेको उनले मेसो पाइनन् । हतार–हतार पिसाब गर्न बस्न खोज्दा टाइट मिनिस्कर्टले दिएन ।
मिनिस्कर्टको पछाडिपट्टि फस्नर थियो । पछाडि हात लगेर फस्नर अलिकति उघारिन् र फेरि बस्न खोजिन् । तर, अझै भएन । फेरि फस्नर अरू धेरै उघारिन् र बस्न खोजिन् । यसपालि पनि सकिनन् । आखिर पूरै फस्नर उघारिन् र बस्न खाजिन् । यति गर्दा पनि भएन । यत्तिकैमा पछाडिबाट एक सज्जनले उनलाई जुरुक्क बोके र खुट्टा फट्याइदिँदै भने– लौ पिसाब फेर्नुस् । अत्तालिएकी रेखाले पिसाब गरिसकेर पछाडिको मान्छेलाई हेर्दै भनिन्, ‘तपाईं को हँ ? नचिनेकी केटीलाई यसरी बोकेर पिसाब फेराउन लाज लाग्दैन ।’
रेखा थापालाई एकजना फ्यानले विदेशबाट साइनिङ अन्डरवेयर (चम्किने कट्टु) उपहार पठाइदिएका थिए । अमेरिकाबाट पठाइदिएको भनेपछि त्यो लर्तरो कट्टु थिएन । प्राय: हलिउड सेलिब्रिटीले लाउने त्यो कट्टु यति चम्किलो थियो कि धेरै बेरसम्म हेर्‍यो भने जो कोही पनि त्यसको प्रकाश धान्न नसकेर बेहोस हुनसक्थ्यो । रेखालाई कट्टु साह्रै मनपर्‍यो तर आखिर पर्‍यो कट्टु । अरूलाई कसरी देखाउने भनेर समस्या पर्‍यो उनलाई । तर, उपाय सुझ्यो । राति साइनिङ अन्डरवेयर लगाएरै सुतेकी रेखा भोलिपल्ट बिहानै आफ्नो सबैभन्दा खुकुलो मिनिस्कर्ट भिरेर सुटिङमा हिँडिन् । उनले सुटिङमा कुनै जुक्ति निकालेर अन्डरवेयर देखाउने विचार गरिन् ।
रेखा थापा फिल्मको सुटिङमा थिइन् । भिलेनलाई उनले किक हानेर ढाल्नुपर्ने दृश्य थियो । रेखाले मिनिस्कर्ट लगाएरै किक हान्न चाहिन् । दुवै जना तयार भए । निर्देशकले एक्सन भन्दै खुट्टा उज्याएर भिलेनलाई बजाउन रेखालाई इसारा गरे । रेखाले दायाँ खुट्टा उचालिन् तर मिनिस्कर्ट निकै टाइट भएकाले खुट्टा धेरै माथि उठेन । खुट्टा टेकिन् र फेरि अर्को खुट्टाले प्रयास गरिन् । यसपटक पनि उनको खुट्टा भिलेनको घुँडाभन्दा माथि पुग्न सकेन । उनले अलि बल लगाइन् । ला…, मिनिस्कर्ट नै ध्यार्र गर्‍यो ।
सुटिङ युनिटका सदस्यहरू मुखामुख गर्न थाले । अर्को मिनिस्कर्टको जोगाड गर्न निर्देशकले सहायकलाई इसारा गरे । तर, रेखाले भने मिनिस्कर्ट बदल्न कुनै चासो देखाइनन् । बरु अलि लजाएजस्तो गरी मुसुक्क हाँस्दै सरी भनिन् । उनी टेक दिन फेरि तयार भइन् र खुट्टा उचालिन् । यसपटक अलि माथि पुर्‍याइन् । तर, मिनिस्कर्टको पछाडि भागमा झन् बेसरी ध्यार्र गर्‍यो । यसपटक भने रेखा पनि लाजले पानी–पानी भइन् । ‘हिजो मासु धेरै खाएकी थिएँ,’ रातो–पिरो अनुहार लगाएर उनले भनिन् । त्यतिबेलासम्म वरिवरि रहेका सबै नाक थुनिरहेका थिए ।
केहीबेरमा पुलिस आयो र ‘नांगी बहुलाही’ लाई एउटा ठूलो कम्बलले घर्लप्प छोपेर गाडीमा हालेर लग्यो । रेखा केही भन्न खोज्दै थिइन् तर मौका पाइनन् । पुलिसचौकीमा लगेपछि भने उनले ठूलै आक्रोश झिकिन् । तिमीहरूले मलाई यहाँ ल्याउने हिम्मत कसरी गर्‍यौ ? म को हुँ, थाहा छ ? म हिरोइन रेखा थापा हुँ, रेखा थापा ।
प्रेम गर्ने शैलीमा पनि प्रविधि हाबी, फेसबुकमा पिरती
फुर्सद हुने बित्तिकै सन्दीप थापाका औँला मोबाइल या कम्प्युटरका किप्याडमा हुन्छन्। फेसबुक चलाइहाल्छन्। रुकुमबाट पढ्न पोखरा आएका उनी फूलबारीमा बस्छन्। टाइमपासका लागि दुई वर्षअघिदेखि फेसबुक चलाउन थालेका उनको फेसबुकबाटै 'लभ' परेको छ। अनलाइनमा हुनेबित्तिकै धेरैजसो केटी साथीसँग कुरा गर्ने उनले ख्यालख्यालमै लभ परेको किस्सा सुनाउँछन्। 'फेसबुकमा धेरैजसो केटीसँग मात्रै कुरा हुन्थ्यो, नदेखिने भएपछि जे कुरा पनि खुलस्त राख्न पाइने,' उनी भन्छन्, 'यत्तिकै मजाक गरेर प्रपोज गरेको एक जना केटीसाथीले स्वीकार रेपछि अहिले चक्कर चलिरहेको छ। '
अहिले युवायुवती फेसबुक, मिग ३३, ट्वीटर, निमबुजमा मस्त र व्यस्त छन्। कक्षाकोठामा पढ्दापढ्दै, सडकमा हि"ड्दाहि"ड्दै, मोटरमा यात्रा गर्दागर्दै वा घरमा बसेका बेला एकोहोरो बनेर युवायुवती मोबाइलमा औला चलाइरहेका भेटिन्छन्। रातभर फेसबुक, मिग अनि निमबुजमा व्यस्त भएर केटाकेटी विपरीत लिंगी साथीसँग कुरा गर्छन्। साथीभाइसँग घुमफिर गर्नेहरू अहिले कम्प्युटर र मोबाइलबाटै संसार घुम्छन्। फेसबुक, निमबुज, र मिगले 'लभ' गर्न सजिलो बनाइदिएको छ। 'प्रत्यक्ष भन्न नसक्ने धेरै कुरा फेसबुकमा सजिलै भन्न सकिन्छ,' फेसबुकमै 'लभ' पारेका भीम खड्का भन्छन्, 'मैले पनि फेसबुकबाटै एकदुई जनासँग लभ पारेको छु।'
सिर्जना गुरुङ निर्धक्क भन्छिन्, 'फेसबुकमा धेरैजसो केटाहरूसँगै कुरा हुन्थ्यो, केटाहरूको प्रपोज पनि धेरै आउँथ्यो। सेलेक्ट गरेर मलाई मन पर्ने एक जनाको प्रपोज स्वीकार गरेपछि अहिले चक्कर चलिरहेको छ। उसले भेट्नका लागि धेरै पटक आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म भेट भने भएको छैन।' आजका युवा यति प्रविधिकेन्द्रित भइसक्यो कि प्रेम गर्ने शैलीमा पनि प्रविधि हाबी भइसकेको छ।
अधिकांशले मोबाइलमा फेसबुक, निमबुज र मिग चलाउ"छन्। फेसबुकबाट लभ मात्रै गर्दैनन्, केही युवाले फेसबुक लभबाटै सेक्सको आनन्द समेत लिइसकेका छन्। पोखराका प्रभु पौडेल (नाम परिवर्तन) करिब छ महिनाको फेसबुक लभपछि आफ्नो केटीसाथीसँग यौनसम्पर्क गरेको सुनाउँछन्। 'फेसबुकमा बस्यो कि सुरुमा हालखबर सोध्यो, त्यसपछि छिल्लिएर अनेक कुरा हुन्थे,' उनी भन्छन्, 'त्यसपछि फोनमा पनि कुरा हुनथाल्यो, भेटघाट पनि भयो। मन मिलेपछि सेक्स गर्नु कुन ठूलो कुरो भयो र?'
नेपालका पोखरा, काठमाडौँ, दमक, चितवन, बुटवल, धरान, दमक, नेपालगञ्जमा मिग र निमबुजका प्रयोगकर्ता धेरै छन्। विशेश गरी प्लस टुका विद्यार्थी राती १० बजेपछि निमबुज, फेसकुब अनि मिगमा झुम्मिन्छन्। निमबुज, फेसबुक र मिगकै माध्यमबाट ब्वाईफ्रेन्ड, गर्लफ्रेन्ड र साथी बनाउनेहरू बढ्दै गएका छन्।
धुम्रपान पीडित PDF | Print | E-
Posted by neeraj sapkota at 08:12
Main lafzo se kuchbizhaar n.kerta
Iska matlab ye n.ke mai tujhe pyar n.kerta
chahta hun tumhe ajbper
Teri soach me apna waqt bekar n.kerta
Tamasa na ban jaye kahin mohbat me mera
Isliye apne dard ko byan n.kerta
Jo kuchbmila usi me khus hun
Mai tere liye khuda se taqrar n.kerta
Per kuch to baat h teri fitrat me zalim
Werna tujhe chahne ke khata baar baar na kerta
Posted by neeraj sapkota at 08:08
राजेश हमालले विराटनगरलाई ससुराली बनाउने
नायक राजेश हमालले विराटनगरलाई ससुराली बनाउन लागेको बताएका छन्।
यो साता विराटनगर पुगेका हमालले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै आउँदो वैशाखमा बिहे गर्ने बताए। उम्मेदवार खडा भइसकेकाले बिहे गरिहाल्न लागेको उनको कथन थियो।
प्रेमिकाको नाम बताउन भने उनले इन्कार गरे। मैले बिहे गर्न लागेको केटी फिल्म क्षेत्रका भने होइनन्, उनले भने।
वैशाखमा बिहे गर्ने सोच भए पनि प्रेमिकाले धोका दिने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ उनमा रहेछ। त्यसैले उनले भने, बिहे हुने वा नहुने भन्ने विषय प्रेमिकामा पनि भर पर्छ। प्रेमिकाले धोका नदिए मात्र बिहे हुन्छ।
Posted by neeraj sapkota at 08:06
नेपालद्धारा अमेरिका ३२ रनले पराजित,सुवास र बसन्त हिरो
मलेसियामा जारी डिभिजन फोर क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई ३२ रनले पराजित गरेको छ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दे नेपालले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २५८ रन बनाएको थियो। भने २५९ रनको लक्ष्य सहित मैदानमा उत्रिएकोअमेरिका ४८.२ ओभर खेल्दै २२६ रनमा समेटिएको थयो।
यसअघी पहिले ब्याटिङ गर्ने कप्तान पारस खड्काको निर्णयलाइ सहि ठहराउँदै नेपाली ब्याट्सम्यानहरुले अमेरिकी बलरहरुको खिल्ली उडाएका थिए। रनको वर्षा गर्ने क्रममा नेपाली ब्याट्सम्यानहरुमा आक्रमकता र संयमताको उत्कृष्ट संयोजन देखिएको थियो । इनिङको अन्त्यतिर धेरै रन बनाउने चक्करमा धेरै विकेट गुमाएपनि नेपालको ब्याटिङले प्रशंकसहरुको मुहारमा चमक ल्याइदिएको छ।
आजको नेपाली ब्याटिङको नायक रहे ओपनर सुवासखकुरेल। उनले १४२ बलमा ११५ रनको शतकिय पारी खेलेका थिए।
उनका अलावा ज्ञानेन्द्र मल्लले ४६ रन, पारस खड्का ४१ रन, अनिल मण्डल २० र प्रदिइ एरैले १४ रनको योगदान दिएका थिए ।
२५९ रन बनाउन मैदान उत्रिएको अमेरिकी ब्याटिङलाई तह लगाउन स्पिनर बसन्त रेग्मीले ५ विकेट लिए ।
त्यसैगरि शक्ति गौचनले २ विकेट,सञ्जम रेग्मीले २ विकेट, अमृत भट्टराईले १ विकेट लिए।
अमेरिका ४८.२ ओभरमा २२६ रन बनाउँदा सम्पुर्ण विकेट गुमाएर रित्तो हात पेभेलिएन फर्किएको थियो।
Posted by neeraj sapkota at 08:05
यतिखेर कमरेड खड्ग ओलीको दिल्ली यात्रा आश्चर्यजनक ढंगले बढिरहेको पाइन्छ । उहांको दौड देखेर कतिलाई त लाग्न सक्छ, उहां कतै नयांदिल्लीका लागि नेपालको आवासीय राजदूत त नियुक्त हुनुभएन ? अस्ति भर्खर उहां दिल्ली जानुभएको थियो । फर्किन पाएको छैन फेरि गइसक्नुभएको छ ।
त्यसो त सबैलाई थाहा छ उहां दिल्ली किन जानुभएको हो ? उहां नेपालको अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा भएबाटै थाहा हुन्छ, उहांको दिल्ली दौडको मकसद के हो ? नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने दिल्लीमा एकपटक ननुहाई धरै छैन । अतः उहां प्रधानमन्त्रीका लागि नुहाउन दिल्ली जानुभएको हो । त्यो सबैलाई थाहा छ ।
तर, बीचमा कहांनिर अड्कियो थाहा भएन । उहां दिल्ली त धेरैपटक जानुभयो तर प्रधानमन्त्री भने अझै बन्नुभएको छैन । प्रधानमन्त्री बन्न पनि धेरै गाह्रो रहेछ । कतिपटक दिल्ली जांदा पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाइएको छैन । मलाई त लाग्छ, प्रधानमन्त्री बन्न उहां दिल्ली धाइरहेको देखेर भारतको प्रधानमन्त्री नै दिक्क भइसक्यो होला । ओलीजी आइरहेको छ आइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री बनाउन भने पाएको
छैन । उहां लगातार दिल्ली आएको आयै भएको देखेर एक दिन भारतको प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो प्रस्ताव राख्न बेर छैन– आप ऐसा किजिए, आप बहुत बार दिल्ली आए । अगर आपको जल्दी है तो कुछ टाइम के लिए आप इन्डिया के ही प्राइममिनिस्टर बन जाइए । मैं छोड डुंगा । चलेगा ?’
सांच्चै भारतीय प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव हाल्यो भने हाम्रा कमरेड ओलीको जवाफचाहिं के हुन्छ होला हगि ?
यतिखेर मेरो देश हराएको छ ।
बिप्पातिर हराएको हो
वा विदेशीले सञ्चालन गरेको
स्वदेशी विमानस्थलतिर हराएको हो ।
अतः म म हराएको देश माग्न आइरहेको छु
तर तपाईं भने मलाई
अध्यादेश दिइरहनुभएको छ ।
मासुको पूरै डल्लो त तपाईंले खाइहाल्नुभयो
म त बांकी बचेको शेष मागिरहेको छु
तर तपाईं भने अध्यादेश दिइरहनुभएको छ ।
तपाईंसंग अध्यादेशै अध्यादेश मात्र छ कि
कुनै देश पनि छ ?
Posted by neeraj sapkota at 08:01
सांसारिक माया जालमा जेलीएको जीवन ।
चोट पिडा र समस्यामा पेलिएको जीवन ॥
मनमा पस्न को सक्छर के छ भनी जान्न ।
अन्याय र झुटै झुटमा खेलीएको जीवन ॥
बाँचुन्जेल माया लाग्छ भन्छन तेरो मेरो ।
साना ठुला समस्यामा झेलिएको जीवन ॥
अभाव नै रैछ यहाँ एक छाक टार्न गार्हो ।
चामलको बियाँ सरी केलीएको जीवन ॥
कुन बेला के हुन्छ कसलाई थाहा हुने यहाँ ।
धकेलेर नहुने कुनासम्म ठेलीएको जीवन ॥
Posted by neeraj sapkota at 08:00
किसानले फलाए नास्पातीको बोटमा बुद्ध
किसानले नासपाती फलाउनु नौलो कुरा होइन । तर चीनका एक किसानले भने आफ्नो बारीमा भगवान बुद्धको आकारका नासपाती फलाएका छन् ।
हुबेइ प्रान्तस्थित हान्दन सहरका हाओ जियांघाङ नामका ती किसानले आफ्नो बगैँचामा यो सिजनमा झण्डै १० हजार दाना बुद्ध आकारका नास्पाती फलाएका हुन् । उनले ती नास्पातीलाई युरोपमा निर्यात गरेर नाम र दाम दुबै कमाउने सोँच बनाएका छन् ।
उनले वर्षको अथक मिहिनेतपछि बुद्धको आकारका नास्पाती फलाउन सफल भए । वास्तवमा ती नास्पाती आफै बुद्धजस्ता भएका होइनन् । उनले नास्पाती चिचिला लाग्दैमा बुद्धको आकारको प्लास्टिकको खोल भिराइदिने गरेका थिए । जसबाट नास्पातीको गेडाको आकार बढ्दै जाँदा बुद्धको मुर्ती जस्ता बन्दथे ।
अहिले ती बुद्धजस्ता नास्पाती किन्नका लागि उनको घरमा स्थानीय बासिन्दाको घुइँचो नै लागेको छ । उनले एउटा नास्पातीको मूल्य झण्डै ६ सय रुपैयाँ तोकेका छन् । स्थानीयलाई थोरै बेचेर बाँकी नास्पाती विदेश निर्यात गर्ने उनको सोँच रहेको छ ।
Posted by neeraj sapkota at 07:59
पैसाको अभावमा टाउकोको खप्पर पेटमा ,क्यानाडाबाट ५० हजार सहयोग
पैसा अभावमा उपचार हुन नसकेपछि टाउकोको खप्पर पेटमा राख्ने बाध्य भएका पोखराका कमल क्षत्रीलाई ५० हजार सहयोग प्रदान गरेको छ । क्यानाडा नेपाल डट नेटले क्यानाडामा बस्ने नेपालीहरु सगँ उठाएको ५० हजार सहयोग रकम विहिबार कमल र उनका बाबुलाई हस्तान्तरण गरेको हो । उनलाई एभिन्युज टेलिभिजनका पोखराव्युरो प्रमुख रामकृष्ण ज्ञवालीले सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका थिए । एभिन्युज टेलिभिजनको चर्चित कार्यक्रम अफ द विटमा खबर प्रसारण भए पछि क्यानाडाबाट सन्चालीत क्यानाडा नेपाल डट नेटले सहयोग रकम संकलन गरेको थियो । क्यानाडामा बस्दै आएका ३० जना नेपालीहरुले सहयोग गरेका थिए ।
उपचार गर्ने पैसाको अभावमा पर्वत घर भै पोखरा बस्दै आएका क्षत्रीको टाउकोको खप्परलाई पेटमा राख्न बाध्य भएका छन् । उनको उपचारका लागि करिब ३ लाख लाग्ने भए पछि अहिले सम्म विभिन्न संघ सस्थाले एक लाख २० हजार मात्रै संकलन भएका बताउदै उनका बाबु श्याम बहादुर क्षत्रीले अझै एक लाख ८० हजार रुपैया उपचारका लागि आवश्यक रहेको बताए । उनीक
ो टाउकोको दुइ तर्फो खप्परलाई पेटमा राख्न बाध्यत छन् त्यसमाथी पनि उसको अधिकांश अंगले काम गर्दैन । उनी न हिड्न सक्छन न त वोल्न । पर्वत जिल्ला तिलाहार गाउँ विकास समिति ७ का २५ वषिर्य कमल क्षेत्री १४ महिनाबाट यस्तो अवस्थामा रहेका छन् । क्षेत्री अघिल्लो वर्षो श्रावण ११ गते मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे देखि यस्तै अवस्थामा छन् । कमलका वावु ले ५ महिना न्यूरो अस्पतालमा राखेपछि आफुले पैसा पुर्‍याउन नसकेपछि अस्पतालबाट निकाल्नु परेको बताए । क्षत्रीले छोराको उपचारका लागि १० लाख रुपैया खर्च गरिसेका छन् । क्षेत्रीले छोराको उपचारको लागी आफुले गाउँमा भएको ७ रोपनी जग्गा सहित घर तथा गरगहना विक्री गरिसकेको वताए । उनले सबैलाई सहयोगको लागी आग्रह समेत गरे । दुर्घटनामा परेपछि पश्चिमाञ्चल अस्पताल पोखरा, काठमाण्डौ न्यूरो अस्पताल र विर अस्पतालमा उपचार भएपनि रकम अभावका कारण उनको उपचार हुन सकेको छैन । उपचारको क्रममा बरिष्ठ न्युरो र्सजन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले टाउकोको खप्पर पेटमा लगेर राखिदिए । उपचार खर्च नहुदा उनको खप्परलाई बचाइ राख्न पेटमा राखिएको हो । उपचारपछि क्षत्री होस आएपनि उनको दिमागे राम्रो संग काम गर्न सक्दैनन ।
Posted by neeraj sapkota at 07:58
वेरुतमा दुई नेपाली महिलाद्वारा आत्महत्या
लेवनानस्थित वेरुतमा एक साताभित्र दुई नेपाली महिलाले आत्महत्या गरेका छन् ।
घरेलु कामदारका रूपमा बेरुत पुगेका सोलुखुम्बु सल्यान ४ की २५ वर्षीया शान्ति राई र काभ्रेपलान्चोक पनौती ९ की रेनुका जर्घामगरले घरभेटीले दिएको पीडा खप्न नसकेर आत्महत्या गरेका हुन् । ४४९४४५२ राहदानी भएकी राईले मंगलबार र मगरले आइतबार आत्महत्या गरेको सम्बन्धित घरधनीले दाबी गरेका छन् । बेरुतको यन्तीजेस जदैहमा घरेलु कामदार रहेका यी दुई महिलाको हत्या हो कि आत्महत्या यकिन गर्न नसकेको बेरुतमा कार्यरत वैदेशिक रोजगार सामुदायिक संस्थाका विनोद उप्रेतीले बताए ।
२ वर्ष अघिदेखि यहाँ कार्यरत यी दुई महिलाको मृत्यु रहस्यमय भएको छ, उनले भने । घरमा काम गर्ने राईले पसलमा आत्महत्या गरेको देखाइएको छ । मगरको शव बुधबार नेपाल पठाइसकेको छ भने राईको शव अहिलेसम्म पठाउन सकिएको छैन, उनले भने । हत्यालाई आत्महत्या गरेको भन्ने र आत्महत्या गर्न बाध्य गराउने दुई घर धनीलाई कारबाही गर्न त्यहाँ कार्यरत नेपालीले माग गरेका छन् । मानसिक, शारीरिक र यौनशोषण तथा दुर्व्यवहारका कारण नेपाली महिला आत्महत्या गर्न बाध्य भएको बताइएको छ ।
उप्रेतीका अनुसार महिनामा १० भन्दा बढी यौनदुर्व्यवहारका निवेदन संस्थामा पर्ने गरेका छन् । ती मध्ये पीडा सहन नसकेर महिनामा २ जनाको मृत्युसमेत हुने गरेको छ । वेरुतमा ८ हजार ३ सय ३३ जना नेपाली महिला घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत छन् । वैधानिक, अवैधानिक दुवै तरिकाबाट यहाँ आएका छन् । अधिकांशले मासिक सयदेखि १ सय ५० डलरसम्म पाउँछन् । मासिक तलब पनि उनीहरूले भनेका बेला पाउँदैनन् अर्कोतिर घरधनीले राहदानी खोसेर राख्ने गरेकाले चाहेको बेला नेपाल फर्कन पनि पाउँदैनन् ।
बेरुतमा आत्महत्या गरेकी भनिएकी शान्ति राईको राहदानीको फोटो ।
Posted by neeraj sapkota at 07:56
खाना खान घर आइपुग्छु भनेको दुई घण्टामा मृत्युको खबर
नवलपरासीको नयाँ बेलानी गाविसस्थित अरुणखोलाका हिमाल सापकोटा र सूर्यप्रसाद पाण्डे सानैदेखिका मिल्ने साथी थिए। उनीहरुले व्यवसाय पनि एउटै गरेका थिए। दुबै जनाको फेन्सी पसल छ अरुणखोलामा। बुधबार बिहान पसलको सामान किन्नसंगै घरबाट विदा भएर काठमाडौँ हिँडेका दुई भाइ घर फर्कने क्रममा भोलिपल्ट धादिङमा सडक दुर्घटना परेको खबरले उनीहरुको परिवारमा शोकले छाएको छ।
घटना लगत्तै टेलिभिजनले दुर्घटनाको खबर प्रसारण गरेपछि परिवारले जानकारी पाएका थिए। स्थानीय स्तरमा सहयोगी र सामाजिक काममा सक्रिय उनीहरुको निधनले अरुणखोला बजार शोकमा डुबेको छ।
घरबाट आमाले लामो बाटो मोटरसाइकलमा नजाउ भन्दा नायारणगढमा राखेर बसमा जान्छौं भनेर हिंडेका थिए हिमालका काका तामेश्वर सापकोटाले गजुरीमा पोष्टमार्टमका क्रममा भने। ढाँटेर आएका हिमालको मोटरसाइकल दुर्घटनामै मृत्युको खबर पाएपछि उनकी आमाको शोकविह्वल छन्। एक छोरा र एक छोरी सहित फेन्सी व्यवसाय गर्दै आएका उनले श्रमिति कोपिलालाई घरमै खाना खान आइपुग्ने भनेर फोन गरेका थिए।
केही समय अघि फोन गरेर घर आउँदै गरेका श्रीमानलाई खाना तयार गर्दै गर्दा दुई घण्टा पछि दुर्घटना भएको खबर सुन्दा पत्याउनै सकिन अन्तिम पटक मुख हेर्न गजुरी आइपुगेकी कोपिलाले भनिन्। पसलको सामान किन्न हिंडेका श्रीमानको मृत्यु भएपछि छोरा छोरी र परिवारको चिन्ताले झन पिडामा परेनी उनी भाववेह्वल अवस्थामा छिन्।
३६ वर्षीय सुर्यप्रसाद पाण्डेले मोटरसाइकल चलाएका थिए। सापकोटा पछाडी बसेका थिए। ‘एक्कासी ज्यामिरेघाटको मोडमा ट्रकसंग ठोक्किएपछि पछाडि बसेका सापकोटालाई ट्रकको टायरले पेल्यो’, ट्राफिक प्रहरी प्रमुख थापाले भने। सापकोटको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मोटरसाइक चालक पाण्डेको उपचारका क्रममा गजुरी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो।
पाण्डेको परिवारमा विहानसम्म घाइते अवस्थामा उपचार गराइरहेको खबर गरिएको मृतकका मामा केशवराज अधिकारीले जानकारी दिए। दुई छोरीका बाबु पाण्डे स्थानीय संघ संस्थामा सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता पनी थिए। उनको मृत्युको खबर विहान अवेर मात्र गरिएको अधिकारीले बताए। उनीहरु एकदमै मिल्ने साथि थिए, संगै खाने संगै हिंड्ने एक अर्कालाई सहयोग गर्ने पसल पनि संगै र व्यावसाय पनि एकै किसिमको गरेका थिए संगै अस्ताए मृतक सापकोटाका काका तामेश्वरले पोष्टमार्टम पछि गजुरीमा शव बुझ्ने क्रममा भने। मृतक दुवैको शव देवघाटमा अन्तिम संस्कारका निम्ति लगिएको छ।
चितवनबाट काठमाण्डौ तर्फ जाँदै गरेको ना ४ ख ४२२२ नम्बरको ट्रकले काठमाण्डौबाट नवलपरासी तर्फ जाँदै गरेको बा ४९ प २८८७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। ट्रक चालक र ट्रक इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीको नियन्त्रणमा छ।
Posted by neeraj sapkota at 07:55
तिमिले धोका दिदैमा के भयो त
मेरो भाग्ग्ये रेखा त मेटिएको छैन||
तिमीले साथ छोडदैमा के भयो त
किस्मतले मलाई साथ छोडेको छैन||
तिमीले मुन्टो मोडदैमा के भयो त
मुन्टो घुमौनेको पनि कमि छैन एहा||
तिमीले दुस्मनी गर्दैमा के भयो त
मेरो खातिर मर्ने पनि कम छैन एहा ||
Posted by neeraj sapkota at 07:54
गजल शाहीरी समाचार सँगालो
07 Sep (21)
06 Sep (29)
05 Sep (28)
04 Sep (34)
03 Sep (37)
02 Sep (57)
01 Sep (61)
08 Apr (15)
Neeraj Sapkota sahajpur7bayala kailali nepali now kanpur uttarpardesh india. Watermark theme. Powered by Blogger.